Sararaa Lakkoofsota Dabalii
Sarara lakkoofsota dabaluu
LibreOfficenin sarara lakkoofsotaa galmee keesaa jiran hundaa ykn galmee kee keessaa keeyyaata filameef saaguu danda'a. Sararri Lakkoofsotaa yemmuu galmee kee maxxansituu hammatama. Sarara lakkaawwii giddu'uti ifteessuu dandeessa, sararrii lakkoofsa jalqabaa, fi sararawwan duwwaa ykn sararawwan goodayyaawwanii lakkaawwuu mirkaneesi. Sarara lakkoofsa jidduu adda baasaa dabaluus dandeessa
Sararrii lakkoofsota dhangii HTML keessaa hin jiru.
Galmee lakkoofsaa keessaai sarara lakkoofsa dabaluuf:
Meeshaalee - Sarara Lakkaawwii.
Lakkaawwii Mul'isi, fi itti aansuun dirqala barbaadu fili.
Keeyyata murtaa'ee keessaati sarara lakkoofsa dabaluuf:
Lakkaawwii Mul'isi fili.
Press Command+TF11 to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.
haalata keeyyata "Durtii" qabdoo mirgaa cuqaasun Foyyeessi fili.
Haalatni keeyyata hundii haalata "Durtii" irrati hunda'a.
Iddoo Sarara Lakkaawwii keessaa, saanduqa filannoo kan keeyyata sarara lakkaawwii keessati dhunfatu haqi
Keeyyata(wwan) iddoo sarara lakkoofsota dabaluu barbaaduti fili.
Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.
Sarara lakkaawwii keessaati keeyyata dhunfadhu.
Haalata keeyyata sarara lakkaawwii dhunfatuus uumuu dandeessa, akkasumas keeyyata sarara lakkoofsa fayyadamuu barbaduuf fayyadami.
Sarara lakkoofsaa jalqabaa ifteessuuf:
Keeyyata keessaa cuqaasi.
Saanduqa filannoo Sarara lakkaawwii keessatti keewwata kan dabalii filadhu.
Saanduqa filannoo Keeyyata irraati lamkkasi filadhu.
Sarara lakkoofsaa sanduuqa Waliin Eegalii keessaa galchi.
Meeshaalee - Sarara lakkaawwii
Lakkaawwii fi Akkaataalee Lakkaawwii
Dhangii - Keeyyata - Lakkaawwii
Title is: Sararaa Lakkoofsota Dabalii